China Flat Top 1.56 Photochromic Grey Cr39 eyeglass Lenses AR Coating ifektri abakhiqizi | IKingway
I-Flat Top 1.56 Photochromic Grey Cr39 eyeglass Lense AR Coating
Inombolo Model: 1.56
Umbala Wamalensi: Photogray / Brown
Umphumela Wombono: I-Flat Top
Izinto Zamalensi: NK55
Esinemthombo: HC, HMC
Ubuningi (Ngababili)> 3000prs, Okuzoxoxiswana
Inkomba Ubude beCororor I-Photochromic I-Diamater
1.56 D28 Okumpunga / Okumnyama 65 / 70mm
Abbe Amandla adonsela phansi athile Ukudluliswa Ukumboza
38 1.20 0.97 HC, HMC / AR esinemthombo
1) I-bifocal ehlanganisiwe edume kakhulu namuhla inengxenye emise okwakheka njengo-D ezungeziswe ama-degree angama-90 ukuze ingxenye eyisicaba ye "D" ibheke phezulu. Ngalesi sizathu, ama-D-seg bifocals nawo abizwa nge- "flat-top" (FT) noma "straight-top" (ST) bifocals.
I-2) Le ilensi eyisihlukaniso engu-D yengxenye engu-D. Kunenzuzo ukuthi isikhungo se-optical sengxenye yombono eseduze kwelensi okungukuthi ingxenye yendawo yokufunda enikeza umbono omuhle kakhulu, itholakala phezulu engxenyeni yokufunda. Futhi ingxenye ebanzi kakhulu yendawo yokufunda ingezansi nje komugqa ohlukanisayo, futhi iyingxenye yelensi oyisebenzisayo angayisebenzisa.
Ukusebenza Kombala Okuvelele ..
1. Isivinini esisheshayo sokushintsha, kusuka kokumhlophe kuye kokumnyama nangokuphambene nalokho.
2. Kucwebe kahle ngaphakathi ezindlini nasebusuku, ukuzivumelanisa ngokuzenzekelayo nezimo zokukhanya ezihlukahlukene.
3. Umbala ojulile kakhulu ngemuva koshintsho, umbala ojulile ungafika ku-75 ~ 85%.
4.Ukuvumelana kombala okuhle kakhulu ngaphambi nangemva kokushintsha.
Ukuphepha kwelensi ye-PC.
Lapho ukuphepha kwamehlo kuyinkinga, amalensi e-polycarbonate imvamisa kuyisinqumo esingcono kakhulu sengilazi yakho yeso.
Womabili amalensi e-polycarbonate ne-Trivex mancane futhi alula kunamalensi ejwayelekile epulasitiki. Ziphinde zinikeze ukuvikeleka okungamaphesenti ayi-100 ekukhanyeni kwelanga okuyingozi kwe-UV futhi zingamelana nomthelela ngokuphindwe izikhathi eziyishumi kunelensi yepulasitiki noma yengilazi.
Le nhlanganisela yenduduzo engasindi, ukuvikelwa kwe-UV nokumelana nomthelela kwenza lawa malensi abe yisinqumo esihle kakhulu ezingilazini zezingane.
Langaphambilini 1.59 HMC Polycarbonate Blue Sika Eyeglass lens
Olandelayo: I-Photochromic Grey 1.56 Cr39 Progressive short corridor eyeglass Lenses HMC
1.56 Izinguquko Eziqediwe Eziqediwe Ama-Photochromic Lens Blank
I-Sf 1.56 Photochromic Progressive Hmc
Photochromic Grey 1.56 Cr39 Okuqhubekayo okufutshane c ...
1.56 Photochromic Grey Single Vision Amaleyitha AR ...
I-Spin Photo1.61 Photochromic Grey cr39 I-Vi eyodwa ...
I-Spin Photo1.67 Photochromic Grey MR-7 Single Vi ...